ညီလေးဖတ်ဖို့….(၂) | thetpaimyo
Posted by မောင်ပိုင် on November 5, 2012
ညီလေးရေ……သူများ ကိုဖြည့်ပေးဖို့ ကိုယ်တိုင်ပြည့်နေမှ ရလိမ့်မယ်လို့ ကိုကို ပြောခဲ့တယ်နော်။ဘယ်လိုပြည့်အောင် ဖြည့်ကြမလဲ ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းအတွက် ညီလေး ကို တွေးကြည့်ဖို့ အစပျိုးပေးချင်တယ်။ပြည့်အောင်ဖြည့်ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းက စာဖတ်ပါ။ဒါပေမယ့် စာ ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ​ ဆိုတာကတော့ အခက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလို့ ကိုကို ထင်မိတယ်။ကိုကိုတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စာအုပ်စာတမ်း တွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီစာအုပ်တွေ အများကြီးထဲကနေပြီးတော့ ညီလေး စိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုကို ရွေးထုတ်လိုက်ပါ။ညီလေး က ငယ်ငယ်ကလေးတည်းက စာသိပ်မဖတ်တော့ ကိုကိုအနေနဲ့ မင်းကို စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးချင်တဲ့စိတ်က တိုးလို့တန်းလန်းမှာ ရပ်နေတယ်။နောက်ပြီး ကိုကိုနဲ့မင်းက အတူနေရတဲ့အချိန်လည်း အရမ်းနည်းတယ်လေ။အခု ကိုကို တက္ကသိုလ်ကျောင်းပိတ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း မင်းက ဆယ်တန်းစာမေးပွဲအတွက် ကျောင်းစာ ပြီးရင်း စာ ပဲလုံးပန်းနေရတော့ ကိုကို စာဖတ်ဖို့မတိုက်တွန်းရဲဘူး ဖြစ်နေတယ်။မင်း ဘက်ကလည်း အချိန်ဘယ်လိုမှပေးလို့မရဘူးလေ။နောက်ပြီး ကိုကို တိုက်တွန်းရင်တောင် အမေ က ကိုကို့ကို သတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်… 🙂 ။
စာစဖတ်မယ့် လူတစ်ယောက် အနေနဲ့ ကိုယ်စိတ်ဝင်စား၊သဘောကျတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုက စတာအကောင်းဆုံးပဲ။ကိုကို ဆို ငယ်ငယ် တုန်းက ကာတွန်းစာအုပ်တွေကြိုက်တယ်။ဒါကြောင့် ကာတွန်းစာအုပ်တွေကိုပဲ ဖတ်ခဲ့တယ်။နည်းနည်းကြီးလာတော့ ၆ တန်းအရွယ်လောက်ကျတော့ အချစ်ဝတ္ထုတွေ စဖတ်မိပြီ။နောက် နည်းနည်းကျတော့ သိုင်းဝတ္ထုတွေဖတ်တယ်။ ၇ တန်းအရွယ်လောက်ကျတော့ ဆရာသောင်းဝေဦး ရဲ့ “စစ်သားဘ၀ အမှတ်တရ”စာအုပ်တွဲတွေကို ခဏခဏ ဖတ်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြီး ကိုကို က ကံကောင်းတယ်ကွ။ကိုကို ၉ တန်း၊၁၀ တန်းကျောင်းတက်ရခဲ့ရတဲ့ နေသာပညာဒါန သင်တန်းမှာ နေသာစာကြည့်တိုက်ကြီး ရှိတယ်။နောက်ပြီး အဲဒီစာကြည့်တိုက်ကြီးမှာ စာဖတ်ဝိုင်းလေးတွေကိုလည်း စနေ၊တနင်္ဂနွေ မှာကျင်းပလေ့ရှိတော့ အတွေးအခေါ်ပါတဲ့စာအုပ်တွေကို ထိတွေ့ဖို့အတွက် ကိုကို မကြောက်တော့ဘူး။ဆရာအောင်သင်း၊ဆရာဖေမြင့်၊ဆရာကျော်ဝင်း စာအုပ်တော်တော်များများကို ၉ တန်းအောင် ၁၀ တန်းတက် နွေကျောင်းပိတ်ကာလ အကြိုသင်တန်းတက်နေတုန်း ကိုကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။၁၀ တန်းမှာတော့ ကိုကိုလည်း စာအုပ်တွေ သိပ်မဖတ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။
ကိုကို မင်းကို ဘာလို့ နောက်ကြောင်းတွေ ပြန်ပြောနေရတယ်လို့ထင်သလဲ။မင်း ကို မြင်စေချင်လို့။စာဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း နဲ့ ဘာမှလုပ်စရာမလိုပဲ တစ်ဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲမှု ရှိလာတယ် ဆိုတာကိုပေါ့။ပထမ ကိုကို တို့က စာအုပ်တွေကို အသုံးချတယ်။နောက်ပိုင်းကျတော့ စာအုပ်တွေက ကိုကို တို့ကို ပြန်အသုံးချတယ်။ကိုကိုတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်၊အယူအဆတွေက အသက်အရွယ်အရရင့်ကျက်လာတယ်ဆိုပေမယ့် ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေပေါ် မူတည်ပြီးတော့လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။စာဖတ်တဲ့သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်နေရာ၊ဘယ်ဒေသမှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားသူ(စာမဖတ်တဲ့သူတွေ..)ထပ်တော့ ခေါင်းတစ်လုံး မြင့်နေတယ်ကွ။သူများထက်မသာရင်တောင်ကွာ သူများထပ်တော့ မနိမ့်စေရဘူးဆိုတာ ကိုကို အာမခံတယ်။ဒါပေမယ့် အဲဒီအတွက်တော့ မော်မကြွားရဘူး။မာနမထောင်ရဘူး။ကိုယ်သာ အတတ်၊ကိုယ်သာ အတော်ဆိုပြီး အတ္တမကြီးရဘူး။မင်း စာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဆိုတာ မင်းကိုယ်မင်း ပဲပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပါ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် အထင်ကြီးလွန်းတဲ့သူတစ်ယောက်က ကျရှုံးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ တဲ့။ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိပါ။ဒါပေမယ့် အထင်မကြီးပါ နဲ့လို့ ကိုကိုမှာချင်တယ်။ဒီတော့ မင်းအနေနဲ့ ဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တိုင်း ကို ဖတ်ပစ်ကွာ။အချစ်ဝတ္ထု ဖတ်ချင်ရင် ဖတ်ပစ်လိုက်၊သိုင်းဝတ္ထုဖတ်ချင်ရင် ဖတ်ပစ်လိုက်…စိတ်ထဲမှာ စည်းကမ်းတွေနဲ့သတ်မှတ်မထားနဲ့။စာအုပ် ဆိုတာ ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့နေရာတစ်နေရာ ပဲ။မင်းအနေနဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ အလုံးစုံ လုပ်ပစ်လိုက်လို့ရတယ်။ဥပမာ-ရော်ဘင်ဟု စာအုပ်ဖတ်နေရင်း မင်းကိုယ်မင်း ဆင်းရဲသားတွေ ကယ်တင်နေတဲ့လူစွမ်းကောင်းအဖြစ် ထင်ရင်ထင်နေလိမ့်မယ်။မာသာထရီဇာ အကြောင်းဖတ်နေရင်း သနားကရုဏာစိတ်တွေ မင်း စိတ်ထဲ တဖွားဖွားဖြစ်နေမှာပဲ။ဟင်နရီဖိုဒ့်တို့၊သောမတ်စ်အယ်ဗာအယ်ဒီဆင် တို့အကြောင်း ဖတ်မိရင်း မင်း လည်းပဲ ဟို ပစ္စည်း တီထွင်ချင်သလို၊ဒီ ပစ္စည်းဖန်တီးချင်သလို ကိုယ့်ကိုကိုယ် တီထွင်သူကြီးအဖြစ်ထင်ချင်ထင်နေမှာ။စာအုပ်ထဲမှာ စီးမြောလိုက်ကွာ။မင်းရဲ့လက်ရှိပစ္စုပန်အခြေအနေ ကို စာအုပ်ဖတ်နေတုန်း မေ့ထားလိုက်။ဖတ်ပြီးရင်တော့ ပြန်သုံးသပ်ပါ။စာအုပ်ထဲက အကြောင်းအရာတွေကို ပြန်စဉ်းစားပါ။မင်းအတွက် မလိုအပ်ဘူးထင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေ့ပစ်လိုက်ပါတော့။စာအုပ်ဖတ်နေရင်း စိတ်ကူးယဉ်တာ ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် စာအုပ်ဖတ်ပြီးမှ စိတ်ကူးယဉ်နေရင်တော့​အရူးတွေပဲ တစ်ယောက်တည်း စိတ်ကူးယဉ်တတ်တာနော်။စာအုပ်ဖတ်ဖို့ ကိုယ်ပေးလိုက်ရတဲ့အချိန်နဲ့ ကိုယ်ဘာပြန်ရသလဲ ဆိုတာညှိကြည့်။စစချင်း ဖတ်တဲ့သူအနေနဲ့ အရမ်းခက်တယ်ကွ။ကိုကို လည်း အဲဒီလိုကြုံခဲ့ရတာ။မလုပ်တတ်သေးတဲ့အချိန်မှာ ဒွိဟ အရမ်းဖြစ်တတ်တယ်။မင်း အနေနဲ့ အတွေးအခေါ်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး(ဒါမှမဟုတ် အခု ကိုကို ရေးတဲ့စာကိုဖတ်ပြီး) စိတ်ကူးယဉ်နေတာတွေကို ရပ်ချင်တယ်ကွာ။လက်တွေ့မှာ ရပ်လို့မရဘူး ဖြစ်တတ်တယ်။ မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အရာတွေကို မင်း ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကနေ သိနေပြီ။အပြင်မှာတော့ လုပ်မိရင်လုပ်မိသွားတယ်။အဲတော့ မင်းကိုယ်မင်း ဒေါသဖြစ်လာပြီ။မင်းကိုယ်မင်း မကျေမနပ်ဖြစ်တယ်။ငါ မကောင်းဘူးဆိုတာ သိရဲ့သားနဲ့ဘာလို့မရပ်နိုင်ရတာလဲ ဆိုပြီးတော့ပေါ့။
ဘာမှ အဲဒီလို ဖြစ်နေစရာမလိုဘူး ညီလေး။၁၅ ၊ ၁၆ ၊ ၁၇ နှစ် အရွယ် ကောင်လေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ အချစ်ဝတ္ထု ဖတ်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်မိမှာပဲ။ကမ္ဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေအကြောင်း ဖတ်ပြီး အားကျအတုယူချင်စိတ်ဖြစ်မိမှာပဲ။သဘာဝ အရ နုနယ်သေးတဲ့စိတ် ကို စာအုပ်တွေနဲ့ရင့်ကျက်အောင်ပြုလုပ်နေတာလေ။ချက်ချင်းကြီး ဥုံ ဖွ ဆိုပြီး ပြောင်းလဲပစ်လို့ရတဲ့အရာ ဘာမှမရှိပါဘူး။မင်းအနေနဲ့ မကောင်းမှန်းသိတဲ့အရာ တစ်ခုကို ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ် လုပ်မိပြီးပေမယ့် တတိယအကြိမ်ကျရင်တော့ လုပ်မိရင်တောင် တွန့်တွန့်ဆုတ်ဆုတ်နဲ့ပါ။ဒီတော့ တစ်ဖြည်းဖြည်းပဲ​ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောင်းလဲယူ။ဒီနေ့မင်း နဲ့ မနက်ဖြန် မင်း မတူအောင်ပဲကြိုးစား။ဖိအားတွေကြားထဲမှာ မနေနဲ့။တွေးရင်းနဲ့ စာဖတ်။စာဖတ်ရင်း နဲ့တွေး။မင်းရဲ့အနာဂါတ်က ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် နေရာနဲ့တန်အောင် စာတွေဖတ်ထားရလိမ့်မယ်။ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မေးလာမယ့် မေးခွန်းတွေကို ဖြေနိုင်ရမယ်။တွေ့လာမယ့် အခက်အခဲတွေကို ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားနိုင်ရမယ်။ဒီအတွက် အတွေ့အကြုံတွေကို စာအုပ်တွေထဲကနေ ကောက်နှုတ်ယူပါ။စာအုပ် တွေဆိုတာ စာရေးဆရာရဲ့ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေကို ရင်ဖွင့်ပြထားတဲ့ နေရာတစ်နေရာ။အခု ကိုကို ရေးနေသမျှ ကိုကို့အသက်အရွယ်အလိုက် မင်းထက်အရင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို မင်း သိစေချင်လို့ ပြောပြနေတာ။မင်း အနေနဲ့ ကိုကို့စာ ကို အသုံးချနိုင်လိမ့်မယ် လို့ ကိုကို မျှော်လင့်ပါတယ်။ကိုကို မင်းကို ပြောပြနေတဲ့သဘောတရားယူဆချက်တွေ အားလုံးလိုလိုက ကိုကိုဖတ်ဖူးသမျှ စာအုပ်တွေထဲက စာရေးဆရာတွေရဲ့အတွေးအခေါ်အယူအဆတွေချည်းပါပဲ။မသိစိတ်အရ ကိုကို့အပေါ်လွှမ်းမိုးနေတဲ့ စာရေးဆရာတွေရဲ့ အယူအဆတွေပေါ့။
ညီလေး ဘ၀မှာလည်း စာအုပ်တွေကို အသုံးချနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း……
ချစ်တဲ့ မင်းရဲ့ ကိုပိုင်
ခေတ္တ – ရန်ကုန်မြို့။
One response to “ညီလေးဖတ်ဖို့….(၂)”
ဆက်ကြိုးစားပါ။မင်းကိုအမ တကယ်လုံးဝမမြင်ဖူးပါဘူး။ညီလေးသို့(၁)ပေးစာဖတ်မိမှစသိတာပါ။မင်းရဲ့ဆုတောင်းကိုလည်းလေးစားလို့စိတ်ထဲရင်းနှီးသွားသလိုဖြစ်တာနဲ့ ပိုင်ပိုင်လို့ခေါ်လိုက်တာပါ။ဗိုလ်ချုပ်လိုလူမျိုးမပေါ်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်မှာလဲနော်။အမ ယုံကြည်တယ်။ဆက်ကြိုးစားပါ